အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေ ကို အထင်းသား ပေါ်လွန်စေ မယ့် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသ တွေ ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားပြန် တဲ့ ချောကလျာ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေ ကို အထင်းသား ပေါ်လွန်စေ မယ့် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသ တွေ ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားပြန် တဲ့ ချောကလျာ
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေ ကို အထင်းသား ပေါ်လွန်စေ မယ့် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသ တွေ ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားပြန် တဲ့ ချောကလျာ
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောက မှာ နာမည်တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေ တိုင်း ချောကလျာ တေစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေတာ ည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆက်ဆီကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ လန်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးကို “မင်းရဲ့ အချစ်များအမြဲတမ်း ကိုယ့်အတွက်ပါ ” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ ချောကလျာ ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။
အခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလို ဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
Source: Chaw Kalayar Facebook
အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ တက္သစ္ဆ ေမာ္ဒယ္လ္ ေခ်ာကလ်ာ ကို သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာက ကိုဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသးပင္မဲ့ ပရိသတ္အမ်ားအျပားရဲ႕ အားေပးဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါတယ္ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဝန္းရံ အားေပးမႈရရွိထားတဲ့ သူမကေတာ့ social media ေလာက မွာ နာမည္တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕ အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ သူေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာမွာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားကာ ပုရိသေတြ ဝန္းရံေနၾကတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမႈကြန္ ယက္ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ရွိ တာေတြ႕ရပါတယ္။ ပုံေလးေတြ တိုင္း ေခ်ာကလ်ာ ေတစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္းေနတာ ည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ဆက္ဆီက်က် ႐ိုက္ထားတဲ့ လန္းလြန္းတဲ့ ပုံေလးကို “မင္းရဲ႕ အခ်စ္မ်ားအၿမဲတမ္း ကိုယ့္အတြက္ပါ ” caption ေလးတဲ့ တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ ေခ်ာကလ်ာ ရဲ႕ အလွ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္တယ္ေနာ္။
အခုလို အဆုံးထိဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္…ေနာက္မ်ားမွာလည္း အခုလို ဆယ္လီတို႔ရဲ႕ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီတင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page ေလးကို Like & See First ေလးလုပ္ေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္….
Previous post ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ်လေး ဝတ်ကာ သူမရဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ဘော်ဒီလေး နဲ့ စက်ဘီး စီးနေတဲ့ မေပန်းချီ
Next post အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အပြတ် ဂေါ်နေတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဖြူသိင်္ဂကျော်